War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Nala Xiriir	Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK. Beesha deegaanka Iidaale Gobalka Bay oo Hubkii ugu tirada badnaa ku wareejisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!. Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) Is-khaashi Ma Ka Dhaxeeyaa A. Madoobe & Ahlu Sun? (Ra’yi Gaaban)
Posted on January 15, 2010 by halganka	Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato. Waraysi Axmed-madoobe siiyey VOA ayaa shaaca ka qaaday colaadda Axmed-madoobe u qabo Mujaahidiinta. Isagu Shabaab buu ku raadgatay . Haddaad hadalka Axmed-madoobe u fiirsato waxaa kaaga soo baxaya labo arrimood: Wuxuu yiri: horay baan u sheegay in meel looga soo wadajeesto Shabaabka. Marka wuxuu u arkaa in Alhu Sun ay ka jawaabayaan dalabkiisii hore. Axmed-madoobe wuxuu yiri: cid kasta oo ka soo horjeedda Shabaabka waa soo dhoweynayaa!
Keliya waxaad mooddaa in Ahlu Sun Wal “Jalaafo” (magacaan anigu baxshay wuxuu ahaa: Ahlu Sun Wal Jabaljaan. Marka kaas walaaluhu mar dambe baxsheen baa igala qurux badan keyga) ka hordhaceen isku-biiridda labada kooxood. Marka Suufiyaddu waa degdegeen oo Axmed-madoobe oo soo socda bay ka hordhaceen waana arrintaas wuxuu isagu sheegayo. Waa ku saxsanyahay Axmed-madoobe inaysan jirin si cad inuu ugu biiray laakiin wuxuu ka sharqamiyey inay dhici karto inay iskaashadaan. Marka muhiimaddu ma ahan inay isku biiraan ama hal magac la baxaan. Sida hadalkiisa ka muuqata waxaa cad inuu diyaar u yahay ciddii ka caawinaysa la-dagaalanka Shabaab, cidday doonto ha ahaato! Taasi waxay ka soo horjeeddaa marka muslimiintu is qabtaan ma kaalmeysan karaan cadowgooda. Mucaawiye (RC) markuu la dagaalayey Amiirul Mu’miniin Cali (RC) wuxuu warqad ka helay Ruum oo leh: Mucaawiyoow (RC) noo ogoloow inaan kaa caawinno oo kaa garabdagaalnno? Mucaawiye (RC) wuu caayey Ruum! Xitaa dhaqanka reer baadiyaha haddii qof qabiilkaaga ah ood rabtay inaad soo dhisho; haddii qabiil kale dilo wey ka xumaan jireen, marmarna wey la dagaali jireen iyagoo leh: maxaa kuu geeyey tuugayaga! Axmed-madoobe arrintii saxaabada (RC) iyo tii Soomaalidaba waa gabay. Ileyn Shabaab waa Muwaxidiin halka Qubuuriyiintu ku dhexjiraan Shirki. Axmed-madoobe oo iska dhigayey inuu iska difaacayo Ahlu Sun oo ku beenabuuratay, hal eray oo gef ah kama sheegin nimankaas qubuuraha gala ee Tigreegu taageerto! Laakiin arrintaas badelkeeda wuxuu caayey Shabaabka! Haddaba dadweynaha Soomileed, X. Islaam, iyo Ictisaam waa arkaan mowqifka Axmed-madoobe iyo inuu diyaar u yahay xitaa intuu Tigree adeegsado hadday ka caawinayaan la dagaalanka Shabaabka. Marka Shabaabka Ilaahay baa ku ilhaamiyey inay ka saaraan Jubbooyinka. Marka Axmed-madoobe wuxuu maray waddadii aan ka sheegi jirnay ee ahayd: in la soo dirsaday. Marka si cad buu u sheegay in wadashaqayn dhexmari karto Ahlu Sun iyo isaga. Wuxuuna sida Shariif dalbaday cid kasta oo ka caawisa la-dagaalanka Shabaabka. Hadalkiisa niman baa uga horreeyey; waxna kama dheefin. Marka Ahlu Sun iyo A. Madoobe waa jabayaan Insha Allaah si dhaqso ah. Shabaabku qofkay geeska gashaan Ilaahay baa fashiliya. Odayaal-dhaqameedkii, Shariif, iyo Axmed-madoobe waa la arkay halkay ku dambeeyeen. WALLAAHI waxaan rajaynayaa in kuwaan hadda masaajidda ka eedeynayana halkaas mari doonaan oo Ilaah arrintooda caddeynayo haddaysan ka toobad keenin. INNAA IDAA NAZALNAA BI SAAXATI QOWMIN FASAA’A SABAAXUL MUNDARIIN
Filed under: Uncategorized « Duulaan Maskaxeedka lag u hayo muslimiinta. Culimo udhalatey dalka yemen oo dagaal jihaad ah ku baaqey. »